गुगलमा वेबसाईट प्रचार गर्न कति समय लाग्छ? - Semalt जवाफ दिनुहुन्छ
त्यसोभए Google मा साइटहरूमा उनीहरूको नतीजाको शीर्षमा देखा पर्न कति समय लाग्छ?
खैर, यसको उत्तर सँधै सरल छैन € this यस लेखमा, म किन यसको व्याख्या गर्नेछु। तिनीहरू भनेझैं बाँधेर बस्नुहोस्।
वेबसाइटहरू प्रमोट गर्न कति लामो समय लाग्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन, कसैले पहिले गुगलले कसरी काम गर्छ र कसरी वेबसाइटहरूको स्तर निर्धारण गर्छ भनेर सोध्नु पर्छ।
हामी गुगलमा वेबसाइटको स्थिति बारे धेरै कुरा लेख्छौं। तर यहाँ हामी अझ सटीक हुन कोशिस गर्नेछौं जुन सबैलाई स्पष्ट हुन्छ।
गुगलको रैंकिंग मापदण्ड:
डोमेनको प्रतिस्पर्धाको स्तर जुन साइटले सञ्चालन गर्दछ।
साइटको गुणस्तर र यसको सुरूवात विन्दु (संरचना, कोड, मात्रा, र सामग्रीको स्तर, गति, र अधिक)।
लि and्कको मात्रा र साइटमा दर्साउने गुणवत्ता।
व्यक्तिको व्यावसायिकता जसले साइटलाई बढावा दिन्छ।
नयाँ साइटहरू जुन स्क्र्याचबाट शुरू हुन्छ, सामान्यतया गतिविधिको आधा बर्ष पछि परिणामहरू देख्न सुरू हुन्छ।
यो नोट गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि एसईओ (जैविक एसईओ) एक समग्र प्रक्रिया हो जुन सम्पूर्ण साइटमा गरिन्छ विशेष वाक्यांशहरूमा मात्र होइन।
यसको मतलब यो छ कि यदि तपाइँको साइट प्रमोटर एक राम्रो काम गरीरहेको छ र एक व्यापक मार्केटिंग दृष्टि छ; धेरै वाक्यांशहरू त्यस मार्गमा सर्न गइरहेका छन् - ती पनि तपाईले पहिलो स्थानमा लक्षित गर्नु भएन।
यो वास्तवमै एसईओको सौन्दर्य हो - यस प्रक्रियाको मुख्य उद्देश्य प्रासंगिक जैविक यातायात बढाउनु हो र केवल विशिष्ट वाक्यांशहरूलाई प्रमोट गर्नु हुँदैन।
गुगलले कसरी परिणामहरूको विश्लेषण गर्छ?
गुगलमा वेबसाईटहरू बढाउनको लागि कति समय लाग्छ र यो किन लामो प्रक्रिया हो भनेर बुझ्नको लागि, गुगलले कसरी काम गर्छ र यसले कसरी नतीजा विश्लेषण गर्छ बारे एक छोटो विवरणमा हामी हेरौं।
साइटमा सामग्री: मात्रा र गुणस्तर।
सर्फरहरूको व्यवहार: सन्तुष्टि, साइटसँग अन्तर्क्रिया, आदि।
प्राविधिक प्यारामिटरहरू: क्रलिंग र अनुक्रमणिका, साइट गति, सुरक्षा स्तर, मोबाइल अनुकूलता, छवि अप्टिमाइजेसन, कोड, र अधिक।
साइटमा लिंकहरू: मैले जानाजानी अन्त्यमा छोडेँ।
यस लेखनको रूपमा, गुगल अझै पनि साइटमा औंल्याउने बाह्य लिंकहरूको मेट्रिक्समा आधारित छ।
यो सत्य हो कि यस विषयमा त्यहाँ धेरै समावेशीकरणहरू छन्, विशेष गरी जब यो स्पामसँग काम गर्ने कुरा आउँछ। तर अझै - गुगलले लिंकको शीर्षकको लागि उपयुक्त प्रतिस्थापन फेला पारेन।
र यहाँ, अन्य चीजहरूको बीचमा, वास्तवमै प्रचारित साइटहरू र ती नभएकाहरू बीचको भिन्नता छ।
किनभने यसको बारे सोच्नुहोस् - पहिलेका तीन खण्डहरू प्रदर्शन गर्न धेरै सजिलो छ: ग्राउन्ड अपबाट राम्रोसँग साइट निर्माण गर्नुहोस्, यो छिटो र सुरक्षित छ भनि निश्चित गर्नुहोस्, र गुणस्तर सामग्री थप्नुहोस्: यसको अनुहारमा, कुनै कार्य गर्न सक्नुहुन्छ कि - दुबै सानो व्यवसाय मालिक र ताजा साम्राज्य।
तर लिंकहरू? होईन र होईन € ¦ यहाँ धेरै तत्त्वहरू छन् जुन नक्कली बनाउन गाह्रो छ र नयाँ जन्म भएको साइट जुन सुरूमै बलियो जोड्ने शक्ति प्राप्त गर्न सक्दैन।
अन्य प्यारामीटर्सबाट लिंकलाई के फरक पार्दछ?
राम्रो प्रश्न! वास्तवमा, केहि वेबसाइटहरूबाट हजारौं लि links्कहरू प्राप्त गर्न यो समस्या होइन। तर मात्रा यहाँ एक भूमिका निभाउँदैन, तर मुख्य रूपमा गुणस्तर। एक सानो व्यापार मालिक कि कसैलाई थाहा छैन एक धेरै कठिन समय आफ्नो क्षेत्र मा शक्तिशाली र आधिकारिक साइटहरु बाट लिंक प्राप्त गर्न हुनेछ।
किन सबैले मलाई लिंक गर्न चाहानुहुन्छ?
अर्को तर्फ, त्यहाँ मार्कर, ग्लोब एन्ड कम्पनी जस्ता साइटहरू छन् जुन हजारौं लि links्कहरू प्राप्त गर्दछन्, प्राय जसो स्वाभाविक रूपमा। र केवल लिंक मात्र होइन, तर सामाजिक सals्केतहरू - मनपर्दो, ट्वीट्स, सेयरहरू, आदि।
किन? किनभने तिनीहरूले स्ट्याकमा सामग्री उत्पादन गर्दछ। एकले क्वालिटीको बारेमा बहस गर्न सक्दछ तर वास्तवमा यी सामग्रीहरू हुन् जुन धेरै ट्राफिक ल्याउँदछन्। त्यहाँ अधिक यातायात साइट मा छ=अधिक संभावना यो लिंक र/वा सामाजिक शेयरहरू प्राप्त गर्न।
लिंकहरूको लागि, मलाई ट्राफिक चाहिन्छ?
होईन, तर तिनीहरूलाई प्राप्त गर्ने प्राकृतिक तरीका हो।
आदर्श संसारमा, प्रवाह सरल छ:
सर्फरहरू साइटमा पर्दाफास भयो
सामग्रीको गुणस्तरबाट प्रभावित
साइटमा लिंक गर्नुहोस्/यो तिनीहरूको ब्लग/सामाजिक नेटवर्कमा उल्लेख गर्नुहोस्
साइट लिंक र प्राकृतिक एक्सपोजर हुन्छ
लौ वास्तविकतामा फर्कौं!
वास्तविकतामा, प्रायः साना र मध्यम आकारका व्यवसायहरूका लागि जुन उनीहरूको कोठामा रुचि राख्छन् बाहेक अरू कसैलाई बेच्दैनन् (र यो सधैं यस्तो हुँदैन), प्रक्रिया सामान्यतया फरक फरक हुन्छ:
ब्यापार मालिकले गुगललाई कसरी साइट प्रमोट गर्ने र त्यसमा थप सर्फरहरू कसरी ल्याउने भन्ने बारे खोजी गर्दछ।
व्यवसाय मालिकले एक वेबमास्टरलाई सम्पर्क गर्दछ।
धेरै जसो केसहरुमा, एक वेबसाइट प्रमोटरले कुञ्जी शब्द अनुसन्धान गर्छ र साइटसँग लि starts्क गर्न थाल्छ र उहि समयमा अनुकूलन प्रदर्शन गर्दछ (उत्तममा, त्यहाँ टिन कम्पनीहरू छन् जुन कि गर्दैनन)।
यातायात र साइट स्थान निरीक्षण गर्नुहोस्।
के तिमि बुझ्छौ म कहाँ जाँदैछु वा मैले पूरै तिर्खाएको छु?
परम्परागत एसईओ प्रक्रियामा, हामी लि artificial्कहरू कृत्रिम रूपमा सिर्जना गर्दछौं, गुगलमा साइट प्रमोट गर्न, ट्राफिक ल्याउन, र रेफरलहरू/बिक्री बढाउन, आदि। ट्राफिकको वृद्धिको कारण, हामी कहिलेकाँही प्राकृतिक लि links्कहरू पनि पाउन सक्छौं (विरलै तर हुन्छ)।
हो, यो केहि टेढो छ र गुगलका प्रकाशक दिशानिर्देशहरूको बिरूद्ध â ¦ ¦ तर यदि मात्र हामी सामग्रीहरू सिर्जना गर्ने थियौं र खुट्टामा खुट्टा राख्ने थियौं भने हाम्रो सुन्दर आँखाका कारण एक अर्कालाई जोडेको थिएन। माफ गर्नुहोस्, निराश छु, यो मात्र हुने छैन। यो सत्य हो, त्यहाँ सँधै अपवादहरू छन्, म आधा मुठी मुठी साइटहरूमा भरोसा राख्न सक्छु जसले मलाई यस्तो क्वालिटी र अपवादात्मक सामग्री सिर्जना गरेको छ जुन केवल लि links्कहरूको पाइलहरू प्राप्त गर्दछ र फलस्वरूप गुगलमा एक्सपोजर बढेको छ।
गुगलमा वेबसाईट प्रचार गर्न कति समय लाग्छ?
माथिको सम्पूर्ण विस्फोटनको आधारमा भन्नु पर्दछ कि साइटलाई गुगलमा द्रुत रूपमा प्रमोट गर्न सकिदैन, केही पृथक केस बाहेक। गूगलले कसरी काम गर्छ, लिंकि element एलिमेन्टमा जोड दिदै कि ज्येष्ठता, समय, र बिजुली निर्माणको धेरै आयामहरू छन्।
लि links्कको मुद्दा बाहेक, गुगल नयाँ साइटहरूको लागि अधिक शंकास्पद हुन्छ। किनकि उनीहरूको "गम्भीरता" लाई मूल्या assess्कन गर्न र यो एक Kikioni साइट हो कि बाक वा कानुनी साइट रगत, पसिना र आँसुमा निर्मित रहेको छ कि बनाउन को लागी साइट हो कि भनेर निर्णय गर्न समय लिन्छ।
तल लाइन, जैविक पदोन्नति ले समय लिन्छ!
यी दुई बिच सब भन्दा उल्लेखनीय भिन्नता भनेको पाठ्यक्रमको समय हो। जब तपाईं गुगलमा अभियान चलाउन सक्नुहुनेछ र उही दिन ट्राफिकको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ, त्यहाँ जैविक पदोन्नति जस्तो कुनै चीज छैन।
मेरो अनुभवमा, प्रायः साइटहरूको लागि, -12-१२ महिना एक सम्मानजनक समय हो जुन परिवर्तन महसुस गर्न थाल्छ, र कहिलेकाँही उल्लेखनीय परिवर्तन: साइटको स्थानहरूमा, यातायातको मात्रामा, र पाठ्यक्रमको मात्रामा साइटबाट नै लिड्स/बिक्री।
वेबसाइटको प्रमोटन गर्न यसले लिने समयको अवधिलाई के असर गर्दछ?
उत्तर या त सरल वा जटिल हुन सक्छ। म साधारण संस्करणको लागि जान्छु।
म धेरै व्यवसाय मालिकहरूसँग कुरा गर्छु, तिनीहरू मध्ये धेरैले सोच्छन् कि उनीहरूको क्षेत्र प्रतिस्पर्धी छैन किनकि उनीहरूसँग वास्तविकतामा प्रतिस्पर्धा धेरै छैन।
तर गुगल वास्तविक जीवनमा जस्तो छैन।
गुगल फरक क्षेत्र हो, र हाम्रा प्रतिस्पर्धीहरू त्यहाँ छन्। तसर्थ, केवल गुगल मा के प्रतिस्पर्धा गर्न प्रासंगिक छ!
अर्को शब्दमा=Google मा साइट प्रमोट गर्न यसले लिने समयको लम्बाई भनेको प्रतियोगीहरूको क्वान्ट एक्स क्वालिटीको प्रत्यक्ष कार्य हो।
यहाँ ध्यान दिनुहोस् खाली गर्न केही बेन्चमार्कहरू छन्
Insanely कम प्रतियोगिता (सुपर आला डोमेन): गुगलबाट पहिलो पृष्ठमा पुग्न १- months महिना लाग्न सक्छ डोमेनबाट विभिन्न वाक्यांशहरूको लागि र हुनसक्छ पहिलो स्थान पनि लिन सक्दछ।
कम प्रतिस्पर्धा: पहिलो पृष्ठमा पुग्न आधा बर्ष लाग्न सक्छ।
मध्यम प्रतिस्पर्धा: आधा वर्ष - एक बर्ष सम्म पहिलो पृष्ठमा पुग्न।
उच्च प्रतिस्पर्धा: कम्तिमा एक वर्ष, पहिलो पृष्ठमा पुग्न डेढ बर्ष।
मानसिक प्रतिस्पर्धा: पहिलो पृष्ठमा पुग्न दुई बर्ष भन्दा बढी
प्रतिबन्धहरू - प्रत्येक नियमको अपवाद छ।
त्यहाँ केसहरू छन् जहाँ वेबसाइट मेकअपको लागि निर्माण गरिएको छ, छिटो, सुरक्षित, अद्भुत सामग्री र उत्कृष्ट लि with्कको साथ, जुन माथि उल्लेख गरिएको भन्दा छिटो प्रगति गर्न सक्छ। उही समयमा, माथिको दर्साउँछ, मेरो समृद्ध अनुभवबाट, गुगलमा मामिलाको अवस्था यो लेखनको रूपमा।
निस्सन्देह, के कम, उच्च, मध्यम फीता आदि हुन् भनेर वर्णन गर्न अलि गाह्रो छ, र प्रत्येक फिल्डमा अभिव्यक्तिहरू समावेश छन् जुन दुबै त्यस्तो हो र त्यस्तै हो - त्यसैले यो केवल सामान्य संकेत हो।
मेरो क्षेत्र कत्तिको प्रतिस्पर्धी हो भनेर कसरी थाहा पाउने?
सर्वप्रथम, ठीकसँग जान्न यो गाह्रो छ। एक अनुभवी वेबमास्टरलाई पनि यसलाई कहिले कदर गर्ने भनेर थाहा हुँदैन।
त्यहाँ त्यस्ता र त्यस्ता उपकरणहरू छन् जसले गुगल ट्र्याक गर्न र कठिनाई स्तरहरू आकलन गर्न कोशिस गर्दछ, तर त्यहाँ कुनै उपकरण छैन जुन सही जानकारी दिन सक्छ।
त्यसो भए Google मा वेबसाइट प्रमोट गर्न कति समय लाग्छ? निष्कर्षमा € ¦
अर्गानिक गुगल पदोन्नति ती जो अहिले र नतीजाहरु खोज्दै छन् को लागी होईन।
यो एक प्रक्रिया हो जुन कम्तिमा २- months महिना लाग्दछ जुन यसको फल काट्न सुरू गर्दछ र त्यो, एकदम सजीलो क्षेत्रमा। अर्गानिक पदोन्नति एक म्याराथन रन हो जुन आत्मा खेलाडीहरू र दीर्घकालीन देख्नेहरूको लागि लक्षित हो।
प्रायः जसो अवधारणाको प्रभावकारिताको मूल्या begin्कन गर्न धेरै जसो अवस्थाहरूमा, एक-छ महिनाको प्रक्रियालाई विचार गर्नुहोस्, खास गरी यो नयाँ वा कहिल्यै नदेखीएको साईट हो भने।
तपाइँको साइट को स्थिति छिटो गर्न को लागी एक तरीका छ?
तपाईले भर्खरको समय र चौडाई बुझ्नु भएको छ यसले तपाईको साइटलाई राम्रो स्थितिमा लिनको लागि लिनेछ। जे होस्, त्यहाँ अन्य विकल्पहरू छन् जुन Semalt ले तपाईंलाई प्रस्ताव गर्दछ तपाइँको वेबसाइट प्रचार गर्न। मलाई तपाईलाई यी केहि उपकरणहरू र उनीहरूको कार्यक्षमताको परिचय दिन्छु।
संग प्याक AutoSEO, छोटो अवधिमा तपाईंलाई उत्कृष्ट नतिजाको ग्यारेन्टी गरिन्छ। यो एसईओ प्याकेज अनलाइन व्यापार गर्नेहरूका लागि वास्तविक "पूर्ण घर" हो। किनभने यसले तपाईंको वेबसाइटको दृश्यता र तपाईंको वेबसाइटको प्रत्येक पृष्ठको अप्टिमाइजेसनमा सुधार गर्दछ।
यसबाहेक, यसले लि building्क निर्माणको पनि ख्याल राख्छ, खोजशब्द अनुसन्धानबाट पूरा वेबसाइट विश्लेषण रिपोर्टहरूमा।
यसको नामले सुझाव दिन्छ कि यो एक धेरै उन्नत एसईओ टेकनीक हो जुन तपाईंको व्यवसायलाई अनलाइन बढावा दिनको लागि विशेष रूपमा डिजाइन गरिएको हो।
यो प्याकेज अन्य साधारण SEO सेवाहरूको लागि अतुलनीय छ। किनभने यसले आन्तरिक अनुकूलनको ख्याल राख्छ; तपाइँको वेबसाइट को विभिन्न त्रुटि सुधार।
यद्यपि Semalt FullSEO व्यावसायिक परियोजनाहरू र ई-वाणिज्यका लागि उत्तम रूपमा उपयुक्त छ; यो स्टार्टअप मालिकहरूको लागि ठूलो मद्दत हुन सक्छ। यसबाहेक, यो वेबमास्टरहरूको साथ साथै व्यक्तिगत उद्यमीहरूका लागि उपयोगी छ जुन आफ्नो वेबसाइटबाट अधिक प्राप्त गर्न चाहन्छन्।
Semalt संग, तपाईंसँग अवसर छ निःशुल्क परामर्श एसईओ विशेषज्ञहरु संग छलफल गर्न को लागी। यसले तपाइँको ठ्याक्कै कुन पदोन्नती योजनाले तपाइँको साइट अनुसार तपाइँको उद्देश्य अनुसार अनुकूल गर्दछ भनेर थाहा दिनेछ।
त्यसोभए, तपाईंको साइटको उत्तम भविष्यका लागि यी विभिन्न उपकरणहरूमा एक नजर लिन न हिचकिचाउनुहोस्।